नेपाल आज | दिल्लीमा थपिए अर्का स्पिनर, प्लेइङ ११ मा पर्न सन्दीपलाई कति कठिन?
दिल्लीमा थपिए अर्का स्पिनर, प्लेइङ ११ मा पर्न सन्दीपलाई कति कठिन?
काठमाडौं । इन्डियन प्रियिमर लिग (आइपीएल) काे आगामी संस्करणका लागि टिमहरुले खेलाडी फेरबदल गर्न सुरु गरेका छन । यसैबीच मुम्बई इन्डियन्स र दिल्ली क्यापिटल्सले पनि एक–एक खेलाडी साटफेर गरेका छन् । मुम्बईले लेग स्पिनर मयंक मार्कडेलेलाई रिलिच गरेको छ । मुम्बईले उनलाई रिलिज गरेसँगै मार्कडेलाई दिल्लीले टिममा लिएको छ । मंयकको स्थानमा मुम्बईले दिल्लीका अलराउन्डर शेरफन रदरफोर्डलाई टिममा सामेल गरेको छ । शेरफनले वेस्ट इन्डिजका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलिसकेका छन् ।
प्रमुख रोजाइमा पर्न सन्दीपलाई गाह्रो
२१ वर्षीय मार्कण्डे दिल्ली गएसँगै तीन वर्षे सम्झौताको अन्तिम सिजनमा रहेका नेपालका युवा लेगस्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई पहिलो रोजाइमा पर्न गाह्रो हुने भएको छ। मार्कण्डले २०१८ को सिजनमा मुम्बईका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। गत सिजन भने उनले ३ म्याच मात्र खेलेका थिए।
दुई वर्षअघिको सिजनमा उत्कृष्ट खेलेका मार्कण्डे भारतीय भएकाले उसैपनि गत सिजनमा आधा भन्दा बढी खेल्न नपाएका सन्दीपले टिममा पर्न थप प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्नेछ। सन्दीपले गत सिजन दिल्लीबाट ६ खेल खेल्दै ८ विकेट लिएका थिए। अब दिल्लीमा नेपालका सन्दीपसँगै मार्कण्डे, अमित मिश्रा र राहुल टेवाटिया गरी चार जना लेगस्पिनर भएका छन्।
इन्डियन प्रियिमर लिग आइपीएल सन्दीप लामिछाने मुम्बई इन्डियन्स र दिल्ली क्यापिटल्स मयंक मार्कडे